Ulaştırmaya 17 Yılda 750 Milyar Lira | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[11 / 11 / 2019] EGO ကို Express Line အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားသောလိုင်း 474	06 တူရကီ
[11 / 11 / 2019] 20 မိုင်အကွာအဝေးအထိAkçarayရထားလမ်းအရှည်	41 Kocaeli
[11 / 11 / 2019] မီးရထားကဏ္ectorအားလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် TCDD အားပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း	06 တူရကီ
[11 / 11 / 2019] Uludaable ကေဘယ်လ်ကားဂရုစိုက်မှု!	16 Bursa
[11 / 11 / 2019] Bursa နှင့် 10 စီမံကိန်းအကြားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားရှိသည်	16 Bursa
[11 / 11 / 2019] Plajyolu ရထားလိုင်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသည်	41 Kocaeli
[11 / 11 / 2019] Eskişehirအာရုံစူးစိုက်မှု .. ! ရပ်တန့်ရန်စီးတီးဆေးရုံ Opera Tram အစီအစဉ်	26 Eskisehir
[11 / 11 / 2019] Akçaray၏လိုင်းအသစ်သည်စီးတီးဆေးရုံသို့ရောက်လိမ့်မည်	41 Kocaeli
[11 / 11 / 2019] Intercity မြန်နှုန်းမြင့် Express Flights စတင်ပါ	06 တူရကီ
[11 / 11 / 2019] Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးမိနစ်တိုးတက်မှုများ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီ17 ဘီလီယံ Lira
17 ဘီလီယံ Lira
10 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, လှုပ်ရှားမှုများ, အထွေထွေ, ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင်အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၊ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်အထွေထွေလမ်းများအဖွဲ့ချုပ် (IRF) ၏နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၊
ကွန်ဂရက်နီးယားနီယမ်ဝန်ကြီး Turhan ကဒီနေ့ခေတ်မှာနည်းပညာဟာအထူးသဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္inမှာအပြောင်းအလဲတွေမှာအပြောင်းအလဲမြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲမှုကိုအန်ကာကာမှာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အနောက်နှင့်အရှေ့, Turhan ကတဦးတည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ, "တူရကီ4ထရီလီယံဒေါ်လာ 1,6 နာရီလေယာဉ်ခရီးစဉ်အကွာအဝေးနှင့်အတူ 30 ဘီလီယံအထိလူဦးရေဖြစ်ပါသည်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးသော့ချက်အမြဲကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုများအတွက်အဓိကလမ်းဆုံမှာတူရကီ၏အာရှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူတိုက်ကြီးချိတ်ဆက် ဆိုလိုသည်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု၏ထက်ဝက်နီးပါးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသအတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သဘာဝသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံတွင်ရှိနေသည်။ ”
Turhan, တူရကီ, နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌မဟာဗျူဟာအချက်ထဲမှာရှိနေခြင်းညွှန်ပြနေဆဲအကြီးအကျယ်တူရကီမှတဆင့်သဘောပေါက်နေသည်အရှေ့ဘက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများပြီးမြောက်ရန်မိမိတို့၏အလုပ်ကိုနေ့ညဉ့်မပြတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆို။
နှစ်ဦးစလုံးလူ့အသက်ကို၏အရည်အသွေးအဖြစ်တူရကီ Turhan များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်သူတို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုယခုဤအခြေအနေတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါငျးတို့သသည် Modes အတွက်သည်အထိအသားကအရမ်းသိသာအကွာအဝေးကြောင်းမျဉ်းသားခဲ့သည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သွားမည်ဟုဆိုသည်။
ဝန်ကြီး Turhan, Marmaray နှင့် Gebze-Halkalı သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာ Suburban လိုင်း၊ Yavuz Sultan Selim တံတား၊ အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်၊ Osmangazi တံတားနှင့် Istanbul-Highzmir အဝေးပြေးနှင့် Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများကဲ့သို့သောကြီးမားသောစီမံကိန်းများသည်ထိုခေတ်မှအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ။
Turhan, ရွာလမ်းကနေမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အ beltway ၏ခှဲဝေအဝေးပြေးလမ်းမကြီး, တဦးကိုလက်တံတား၏ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရှိအမျိုးသားရေးလမ်းကွန်ယက်၏စံချိန်စံညွှန်းများသက်တမ်းတိုးဖို့အဆင့်မြှင့်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, တူရကီကနေတဆင့်အရှေ့အနောက်, သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတကာစင်္ကြံတစ်မြောက်ဘက်-တောင်ဘက်လမျးညှနျခလုပ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Turhan, 17 သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သာ 750 ပေါင်ဘီလီယံကိုသူတို့သုံးစွဲခဲ့သည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အဝေးပြေးလမ်းမများပေါ်တွင်ကုန်စည်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Turhan၊6ထောင်ပေါင်း 101 ကီလိုမီတာနှင့်6တစ်ထောင်သာခွဲခြားထားသောလမ်းကွန်ယက်အားသဘောသဘာဝနီးပါးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ယနေ့ 27 တစ်ကီလိုမီတာကီလိုမီတာကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်ရန် 77 ပြည်နယ်ဖြစ်လာသည်ဟုသူကပြောသည်။
Turhan သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 714 ကီလိုမီတာထောင်ပေါင်းတစ်ထောင် 17 ထောင်ပေါင်းထောင်ပေါင်း 322 ကီလိုမီတာတိုးပွားလာခြင်းဖြင့်3ထောင်ပေါင်း 36 ကီလိုမီတာ၊ အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် 68 ထောင်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ 229 လမ်းကွန်ယက်အတွက် 38'nin BSK စံချိန်စံညွှန်းများရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
Iyle BOT ပုံစံဖြင့်5ထောင်ပေါင်း 556 ကီလိုမီတာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
တည်ဆောက်မှု - လည်ပတ် - လွှဲပြောင်းခြင်း (BOT) မော်ဒယ် 2035 သည်5ထောင်ပေါင်းများစွာ 556 ကီလိုမီတာပိုမိုဖော်ပြမှုများတည်ဆောက်ရန်အစီအစဉ်များမတိုင်မီအထိ Turhan ကပြောကြားခဲ့သည်။
Yapımဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ဤစီမံကိန်းများ၏ 597 ကီလိုမီတာအပိုင်းတွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ သြဂုတ်လတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတ၏ပါဝင်မှုဖြင့်4ပေါ်ရှိ Osmangazi တံတားအပါအ ၀ င် Istanbul-Bursa-Izmir အဝေးပြေးလမ်းမတစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Yavuz Sultan Selim တံတားအပါအ ၀ င် Odayeri-Kurtköyအပိုင်းကိုမြောက်မာရ်မာရာကားလမ်းဖွင့်ရန် 398 ဖြစ်သည်။ Kınalı-Odayeri နှင့်Kurtköy-Akyazıကဏ္sectionsများသည် ဆက်လက်၍ အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် 1915 ကီလိုမီတာ Malkara-Gallipoli အပိုင်း၊ 101 ကီလိုမီတာ Menemen-AliağaÇandarlıကားလမ်းနှင့် 96 ကီလိုမီတာ Ankara-Niğdeအဝေးပြေးလမ်း၊ 330 akkanakkale တံတားတည်ရှိရာ Knalal-Tekirdağ-Çanakkale-Savaşteကားလမ်း - Savaşte
၀ န်ကြီး Turhan ကတိုင်းပြည်၏စိန်ခေါ်မှုပထ ၀ ီအနေအထားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာဥမင်များနှင့်တံတားများဆောက်လုပ်ခြင်းသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ တစ်ချိန်တည်းတွင်3Storeyed Big Istanbul ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုအနေဖြင့်တစ်ခုတည်းသောဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် XNUMX၊
Turhan သည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားနှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပေးသည်။ လက်ရှိမီးရထားလမ်း၏ 45 ရာခိုင်နှုန်းသည်အချက်ပြထားပြီး 2023 ၏ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းသည်လျှပ်စစ်အချက်ပြမှု၏ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်ဟုသူကပြောသည်
အလားတူမီးရထားလမ်းနှင့် Cable ကားသတင်း
တစ်နှစ် 14 144 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 29 / 12 / 2017 2003-2017 နှစ်များအကြား၊ 76 ဘီလီယံဒေါ်လာဘီလျံ၊ 22 ဘီလီယံဒေါ်လာရထားလမ်း၊9ဘီလီယံဒေါ်လာလေကြောင်း၊2ဘီလီယံဒေါ်လာရေကြောင်းကဏ္,၊ 35 ဘီလီယံဒေါ်လာဆက်သွယ်ရေးကဏ္ Government အစိုးရမှyatırım
ဝန်ကြီး Arslan: "ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများ 15 474 တစ်နှစ်ဘီလီယံခန့် liras ဖြုန်းဖို့ရှိသည်" 23 / 06 / 2018 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Ahmet Arslan က“ အူစတန်ဘူလ်လေဆိပ်သစ်သည်ကန ဦး တွင် 100 ထောင်၊ လူ ဦး ရေ၊ TNPP ၏အထပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 20 သို့ရောက်သောအခါ, 2023 ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများသည်Tüpraşလည်ပတ်ချိန်တွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
3 ဘီလီယံကိုပေါင်ဟာမက်ထရိုစီမံကိန်းသုံးစွဲလိမ့်မည်ပို့ဆောင်ရေး 1.7 ဝန်ကြီးဌာနကျော်ယူထားပါတယ် 25 / 02 / 2015 ဒါဟာဘီလီယံအထိပို့ဆောင်ရေး31.7 ဝန်ကြီးဌာနကျော်ပေါင်ဟာမက်ထရိုစီမံကိန်းသုံးစွဲလိမ့်မည်ကို ယူ. , ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန, တူရကီယေဘုယျအားဖြင့်မြေအောက်ရထားနှင့်အလင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းများအတွက်သန်း xnumx't မှ 2015 1 734 တထောင်ဘီလီယံစုစုပေါင်းသုံးဖြုန်းပါလိမ့်မယ် ...
တံဆိပ်ခေါင်းပေါ်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Binali Yildirim 12 / 09 / 2013 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ် Binali Yildirim တံဆိပ်ခေါင်း: 11 ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကောင်စီ "2023 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရည်မှန်းချက်" ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Ulaşımသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အားလုံးအတွက်လွယ်ကူစွာသွားနိုင်ခြင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့်ကျင်းပသောအစည်းအဝေးများတွင်ကဏ္ held သည်အစီရင်ခံစာအားအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။
2019-2020 Metrobus ကြေးလိုင်ရာဘယ်လောက်လဲ .. Metrobus အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ကြေး Lira ဘယ်လောက်လဲ။ 25 / 10 / 2019 အစ္စတန်ဘူလ်ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များအနက်မှတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သောမက်ထရိုဘတ်စ်ကားစီးရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ BeylikdüzüမှSöğütlüçeşmeသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပေးသော metrobuses များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနှုန်းထားများရှိသည်။
3 ။ လေဆိပ် အဆိုပါxnumx.köpr Arslan Ahmet တူရကီ ကတ္တရာစေး bursa Bursa မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ရထားလမ်း သံလမ်း အဆင့်ကူး အစာရှောင်ခြင်းရထား အစ္စတန်ဘူလ် ဘူတာရုံ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး တံတား marmaray Marmaray စီမံကိန်း မက်ထရို Metrobus ဘတ်စ်ကား ရောင်ခြည် ရထားလမ်းစနစ် TC STATE ရထားလမ်း ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက် TCDD TCDD TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ကေဘယ်လ်ကား ဓါတ်ရထား tren TÜDEMSAŞ အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ TÜVASAŞ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကား Yavuz Sultan Selim တံတား YHT မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား IETT အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး İZBAN Izmir Izmir မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစနစ်များထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း
နိုဝင်ဘာလ 12 @ 14: 30 - 15: 30
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Sivas Bostankaya ရထားများကိုဘတ်စ်ကားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
နိုဝင်ဘာလ 13 @ 09: 30 - 10: 30
TÜDEMSAŞ ၀ န်ထမ်းများသည် Bozkurt စက်ခေါင်းရှေ့တွင်အောင်ပွဲခံရန်ဆုတောင်းပါသည်
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 12 နို ၀ င်ဘာ 1935 Irmak-Filyos လိုင်းပေါ်မှနာဖီးယားသရုပ်ဆောင်ခြင်း
တူရကီရဲ့အမြင့်မြန်နှုန်းနှင့် high-speed မီးရထားလိုင်းနှင့် Maps
Bosphorus Tube Crossing နှင့် Gebze မီးရထား Halkalı Suburban Lines အကြောင်း
အတူ Eskisehir ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးဥပမာဖြစ်လာ
EGO ကို Express Line အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားသောလိုင်း 474
မီးရထားကဏ္ectorအားလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် TCDD အားပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်YavaşမှYıldırımBeyazıtတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများကိုပြောကြားသည်
Derevenk သည် Hulusi Akar Boulevard နှင့်ဆက်သွယ်သည်
Bursa နှင့် 10 စီမံကိန်းအကြားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားရှိသည်
Eskişehirအာရုံစူးစိုက်မှု .. ! ရပ်တန့်ရန်စီးတီးဆေးရုံ Opera Tram အစီအစဉ်
Intercity မြန်နှုန်းမြင့် Express Flights စတင်ပါ
Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးမိနစ်တိုးတက်မှုများ
RayHaber 11.11.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
နိုဝင်ဘာလ 13 @ 10: 00 - 11: 00
နိုဝင်ဘာလ 13 @ 11: 00 - 12: 00
တင်ဒါအသိပေးချက် - 49 E1 Raya ရရှိနိုင် 20 Piece R 300 Radius 1 /9ရှိုသော Monoblock မန်းဂနိစ် Core ကို ၀ ယ်ရန်
နိုဝင်ဘာလ 13 @ 14: 00 - 15: 00
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - မီးရထား ၂ နှင့်ရထား ၃ ကူးတို့စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း
၀ ယ်ယူခြင်းသတိပေးချက် - ကွန်ပျူတာနှင့်စက်ပစ္စည်းများအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
နိုဝင်ဘာလ 14 @ 10: 00 - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
နိုဝင်ဘာလ 14 @ 14: 00 - 15: 00
တစ်နှစ် 14 144 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ဝန်ကြီး Arslan: "ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများ 15 474 တစ်နှစ်ဘီလီယံခန့် liras ဖြုန်းဖို့ရှိသည်"
3 ဘီလီယံကိုပေါင်ဟာမက်ထရိုစီမံကိန်းသုံးစွဲလိမ့်မည်ပို့ဆောင်ရေး 1.7 ဝန်ကြီးဌာနကျော်ယူထားပါတယ်
တံဆိပ်ခေါင်းပေါ်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Binali Yildirim
2019-2020 Metrobus ကြေးလိုင်ရာဘယ်လောက်လဲ .. Metrobus အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ကြေး Lira ဘယ်လောက်လဲ။
အများစုမှာပစ္စည်းများ 2014 အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစေမည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး YHT မှုတ်
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် TCDD ဝန်ထမ်းရေးရာဆုကို Published
ဝန်ကြီးYıldırım:755 စီမံကိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘီလျံခန့်ပေါင်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်
Elven ဝန်ကြီးများ: နောက်ဆုံး 11 20 ဘီလီယံခန့် liras ကျနော်တို့ Make တစ်နှစ်မီးရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 11 နိုဝင်ဘာ 2010 Seyrantepe ဘူတာ
Taurus Regional Command မှနိုဝင်ဘာလ91919
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 8 Ksım 1874 Agop Azarian ကုမ္ပဏီ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (232) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
«စက်တင်ဘာလ Kas »
BANTBORU Off Road Team သည်စင်မြင့်သို့မဆင်းပါ
အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး Oguzhan မှ Assigned အမဲလိုက်ခြင်းအတွက် ALD Automotive တူရကီ
BMW သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်အနိမ့်အမြင့်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောရှင်းလင်းခြင်းနှုန်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
Monster စွမ်းအင်လေယာဉ်မှူး Lewis က Hamilton က6။ တစ်ခါကချန်ပီယံ
Marmaray လက်မှတ်စျေးနှုန်းနှင့် Marmaray လေ့လာရေးခရီးအချိန်
Gaziantep Gaziray - အစီအစဉ်အပေါ်စီမံကိန်း
TCDD သည် 262 ၀ န်ထမ်းကိုခန့်အပ်လိမ့်မည်
Afyonkarahisarlı Tiny ရထားလမ်းကိုလေ့လာသည်
TÜDEMSAŞ 80 နှစ်
Izmir Denizli ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
သွေးကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနေသောကလေးငယ်များတွင် IETT ၀ န်ထမ်းများသည်မျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ဆင်သည်
BOT စီမံကိန်းများအတွက်အများပြည်သူခရီးသွားအာမခံအတွက် 65 ဒေါ်လာဒေါ်လာသန်းအရှုံး